Izimbangela zokuncipha kwesisindo emadodeni anokudla okujwayelekile > Izinkinga zesifo sikashukela
Ukwehla kwesisindo okumangazayo emadodeni
Ukwanda kwesisindo somzimba kubangela ukulimala kwempilo yabesifazane nabesilisa. Ngakho-ke, kufanelekile ukuqapha isisindo sakho. Uma ukwehla kwesisindo kungenxa yemidlalo esebenzayo, imikhawulo yokudla - asikho isizathu sokukhathazeka. Indlela yokuphila esebenzayo ngemuva kwesikhathi eside yokungasebenzi ihlala iholela ekulahlekelweni kwesisindo okubukhali. Konke lokhu kubonga nge-testosterone, eqala ukukhiqizwa ngentshiseko, iguqula amanoni abe yimisipha yemisipha. Kepha, uma indlela yokuphila yendoda ihlala ingashintshiwe, bese kwehla isisindo, kunesizathu sokukhathazeka. Kungaba nezizathu eziningi zalokhu. Imvamisa, ukwehla kwesisindo okubukhali emadodeni kukhombisa ubukhona be-pathologies enkulu emzimbeni. Njengomthetho, lezi yiziphazamiso zohlelo lwe-endocrine, umphumela wokuxineka.
Umphumela wokucindezela kwesisindo
Iningi lososayensi libonisa ukuthi kungukucindezela, imizwa engemihle ebangela ukulahleka kwesisindo okubukhali emadodeni ngaphandle kokushintsha indlela odla ngayo. Ngaphansi kwethonya lokuthuthumela kwengqondo, kubonwa ukwehla okukhulu kwesisindo somzimba. Namuhla kunzima kakhulu ukugwema ukucindezela. Zonke izinsuku sibhekana nokushaqeka ekhaya, emsebenzini, kwezokuhamba. Futhi, umsebenzi ochwepheshe uthinta ukuqina kwe-psyche. Uma owesilisa ephethe isikhundla esiphakeme esinenqanaba elanele lokuzibophezela, unikezwa izingcindezi zansuku zonke kuye.
Izimbangela zokuncipha kwesisindo emadodeni anokudla okujwayelekile kungaba ngale ndlela elandelayo:
Ukusebenza ngokweqile ngokomzimba nangokwengqondo
Umzimba wendoda uyakwazi ukubhekana nobunzima ngokushesha. Lokhu kuyasebenza nasekubuyiselweni kwesisindo esijwayelekile. Futhi akudingekile ukuthatha imithi ekhethekile. Kepha, uma izingcindezi empilweni yensizwa ziphenduka izinto ezihlelekile, usizo lochwepheshe luyadingeka.
Njengomthetho, ukulahleka kwesisindo okubukhali ngaphandle kokushintsha ikhwalithi yokudla kukhombisa izinqubo ze-pathological. Ngakho-ke umzimba uzama ukujikijela wonke amandla nokugcina amandla okulwa nalesi sifo. Futhi okokuqala, izicubu ezinamafutha nezemisipha ziyasetshenziswa. Ukwehla kwesisindo okungenakuqhathaniswa emadodeni kuncike ekubonisaneni nodokotela ngaphandle kokwehluleka. Ungadinga ezinye izidakamizwa ezilula ezivuselela isistimu yezinzwa ephakathi. Lokhu kuzosiza le nsizwa ukuthi ibuyele kwifomu yayo yangaphambili. Ukwelashwa okusheshayo kuqala, mancane amathuba okuthi ukuthuthuka kwenkinga kusuka kwinqubo yokulahlekelwa isisindo.
Imvamisa, ukwehla ngokushesha kwesisindo emadodeni onomsoco ojwayelekile kuvusa ukusebenza okungafanele kohlelo lwe-endocrine. Kulokhu, esikhathini esiningi, i-gland yegilo iyahlupheka. Ngokuhluleka kwe-hormonal ku-gland yegilo, izinhlanganisela ezithile ziqala ukwakha, okuvusa ukushiswa ngokushesha kwamafutha namakhalori.
Uma ungaxhumani nodokotela ngesikhathi esifanele ukuze uthole usizo, izinkinga eziningi zingavela. Enye yezifo eziyingozi ze-thyroid yi-hyperthyroidism. Kulokhu, ukukhiqizwa ngokweqile kwama-hormone yi-gland kwenzeka. Izimpawu zalesi sifo yizimpawu ezilandelayo:
Ukwehla kwesisindo okusheshayo (kufika ku-10-15 kg),
Ukwehla kwezinga lokujula kwenhliziyo,
Ebona lezi zimpawu kuye, indoda akufanele inephuphe ukuvakashela udokotela we-endocrinologist. Ngempela, esigabeni sokuqala sokuthuthukiswa kwalesi sifo, umphumela omuhle kakhulu uqinisekisiwe. Ukwehla kwesisindo okubukhali emadodeni kungabangelwa ukuba khona kwesifo se-endocrine esifana nohlobo 1 sikashukela mellitus. Lolu hlobo lukashukela luthembele kwe-insulin. Indoda izodinga ukujova i-insulin nsuku zonke.
Ukukhohlakala kwalesi sifo kulele ekutheni ikhula kancane kancane, ngaphandle kokulimala. Kepha iqala ukukhombisa izimpawu zayo sesivele isenkathini yokukhuphuka. Iziguli ezinesifo sikashukela zinganciphisa isisindo somzimba, kuyilapho kuhlale kukhula isifiso sokudla, ngisho nobudlova. Isiguli somile kakhulu. Indoda iphunga iphunga elinamandla le-acetone ephuma emlonyeni wakhe. Okufanayo kuhamba ngomchamo nokujuluka. Lesi sifo siyingozi kakhulu esigulini. Ngokukhuphuka noma ukuncipha koshukela wegazi, i-coma kungenzeka. Futhi hhayi kuzo zonke izimo kungenzeka ukuhoxisa isiguli kukho. Isifo sikashukela sidinga ukubhekwa njalo uchwepheshe.
Ezinye izimbangela zokuncipha kwesisindo emadodeni
Amadoda anciphisa isisindo ngezinye izizathu. Ngaphezu kwama-80% azo zonke izimo zokuncipha kwesisindo emadodeni zikhombisa ukungasebenzi kwesitho noma uhlelo lomzimba. Umuntu ngamunye kudingeka aqaphe isisindo sabo, futhi asilawule. Uma kukhona ushintsho olubonakalayo ngaphandle kokwazi ukuthi kungani, khona-ke kufanele ufune usizo kuchwepheshe. Ngaphezu kwezimbangela eziphambili zokuncipha kwesisindo ngokuzumayo, kunezinye izifo eziningana ezivusa ukushiswa ngokushesha kwamafutha nemisipha.
Ukwehla kwesisindo emadodeni anokudla okujwayelekile kungaba uphawu lwesigaba sokuqala somdlavuza. Kulokhu, ukulahleka kwezinwele, izipikili ezibunjiwe, ukucwazimula kwesikhumba kanye ne-sclera yamehlo nakho kufakwa ekwehliseni isisindo. Njengoba ukwazi ukubona, izimpawu ezinjalo zivame ukunakwa. Kodwa ukwehla okubukhali kwesisindo kungashukumisela isiguli ukuba sibonane nodokotela. Izenzo ezisebenzayo kuphela ezizovumela ukutholwa okufika ngesikhathi kokukhula kwe-tumor emzimbeni. Ezimweni ezinjalo, umdlavuza wohlelo lokugaya ukudla, amanyikwe, nesibindi kuvame ukunqunywa. Ukwehla kwesisindo kungabonakala kusukela osukwini lokuqala lokuqala kwe-neoplasm. Ngakho-ke, kubalulekile ukuqapha isisindo sakho ukuze ukhombe inkinga ngesikhathi esifanele.
Izimpawu zokuqala kanye nezijwayelekile kakhulu ze-oncology yilezi zimpawu ezilandelayo:
Ukuphiliswa isikhathi eside kwamanxeba nezilonda
Isitulo esingasebenzi kahle
Ukunciphisa umzimba ngokweqile
Ukuvela kwezimpawu zamanzi.
Ukuntuleka kwe-adrenal kungakhuthaza ukwehla kwesisindo kubantu abasha ngaphandle kwesizathu. Kulokhu, i-adrenal cortex ayihambelani nomsebenzi wayo, iyayeka ukukhiqiza ama-hormone ngesilinganiso esifanele. Lesi sifo singaba nzima futhi singamahlalakhona, siyisiqalo futhi sesibili. Izimpawu zifaka ubuthakathaka bemisipha, ukwehlisa umfutho wegazi, isifiso esinosawoti, ukumnyama kwesikhumba, nobuhlungu besisu.
Isifo sofuba samaphaphu
Lesi sifo sinesithombe esibanzi sezimpawu. Futhi ukwehla kwesisindo okubukhali, hhayi ukukhwehlela okwehlisayo, okuyisibonakaliso sokuqala se-pathology. Isifo sofuba sithathwa njengesifo esinzima. Ukulwa naye kuzophumelela kuphela esigabeni sokuqala sentuthuko. Ngemuva kokuncipha kwesisindo, kufakwa izimpawu ezinjalo:
Ukuhamba ngesifuba esifubeni, i-bronchi,
Ukuhlukaniswa kwegazi noma ubomvu kanye nesikhohlela,
Lesi sifo sibizwa nangokuthi i-senile dementia. Ngakho-ke, ukunciphisa isisindo kungadala ushintsho oluhlobene nobudala. Isifo i-Alzheimer's sibonisa ngokulahleka kokuxhuma kwe-neural ebuchosheni. Ukhula, njengomthetho, ngemuva kweminyaka engama-65-70. Uma owesilisa enesifo sofuzo, lesi sifo singabonakala esemncane ngeminyaka engama-40 kuya kwengama-5. Isiguli sinokuhlakazeka esikhaleni, isikhathi, ukulahleka kwememori. Okokuqala, izixuku zenkumbulo zikhipha imicimbi yakamuva, bese inkumbulo yesikhathi eside inyamalale. Iziguli ezinje ziyazikhohlwa izinto eziyisisekelo - zidla, zigqoke, ziye endlini encane, ziphuze amanzi. Konke lokhu kuholela ekwehleni okubukhali kwesisindo somzimba. Imininingwane yesiguli ayikwazi ukuba khona ngaphandle kosizo lwezihlobo, izihlobo, abangane.
I-ulcerative colitis yisifo esingelapheki lapho ulwelwesi lwe-mucous lwekholoni luvutha khona. Ukwehla kwesisindo kuleli cala kubhekwa njengophawu oluphambili. Futhi, lokhu kufanele kufake phakathi ubuhlungu besisu, uhudo, ukuqunjelwa, ukuqhakaza, ukulahleka kokudla, izinso nenhliziyo. Ukuvinjwa kwamathumbu ampofu futhi kuholela ekulahlekelweni kwesisindo okungalindelekile. Imvamisa, ukuvimbela kwamathumbu kukhombisa ubukhona bomdlavuza. Kuzo zonke izimo, ukunciphisa umzimba kuhambisana nobuthakathaka obujwayelekile bomzimba. Musa ukubambezela ukuvakashela udokotela. Ukulahleka nje kwama-3-5 kg ​​ngaphandle kwesizathu kuyisizathu sokukhathazeka. Futhi ukungenelela okufika ngesikhathi okusemthethweni kuzogwema imiphumela emibi, kulondoloze impilo.
Umphumela wokulayishwa ngokweqile kwemizwelo
Njengabesilisa abaningi, nginciphisa isisindo esivela kulokho okwenzeka kimi. Noma yiziphi izimo ezicindezelayo zisheshe zishise amakhilogremu angeziwe. Kodwa-ke, ngaqala ukuqaphela umthelela omubi wokugcwala ngokweqile ngokomzwelo enhlalakahleni yami, engikhathaza futhi kuze kungesabise. Ngiqale ukulala ngokungagodli, futhi ngilala isikhashana, ngavuka ebuthweni bami obunzima. Ubuhlungu bekhanda obuvame ukubangela ukuphazamiseka okuhambisana nokungaphatheki kahle ngokweqile. Ngikhathala masisha futhi sengikulungele ukuwela ekucindezelekeni okuvela esikhathini eside.
Ukukhathazeka ngokulahleka kwesisindo okungazelelwe ngemuva kwesizinda sokudla okunempilo kungenze ukuthi ngihlolwe ngudokotela, njengoba ngithole ukuthi umzimba wesilisa onempilo uyakwazi ukubhekana nezimo ezicindezelayo. Futhi ukuncipha kwami ​​okusheshayo kwesisindo kukhombisa isifo esifihliwe.
Ngeluleka wonke amadoda ngokunciphisa isisindo okungafanele okungenzeka ukuthi angalihlehlisi ikhambi lenkinga esebhokisini elide, kepha afune izeluleko esikhungweni sezokwelapha ngokushesha. Ukunakekelwa kwempilo akusho ukuthatha isikhathi eside!
I-ecology enyanyekayo ebangelwa yimikhiqizo yokungcola yama-megacities, njengamagesi aqeda enanini elikhulu lezimoto, ithinta kabi isimo sezindlala ze-thyroid yegland. Ngokuqongelela kwezinto eziyingozi emzimbeni, uhlelo lwe-endocrine lungasebenza.
Izinqubo ze-Pathological ku-gland yegilo emadodeni zivame ukubonakaliswa ezinguquko kwesisindo somzimba. Ngokuvela kwezinkinga zezempilo, amakhompiyutha athile asheshiswa emzimbeni. Amakhalori aphuma ekudleni okuqediwe, ngenxa yalokho, awagcotshwa, kepha asha ngokushesha.
Uma udla njalo futhi ngobuningi ngemodi yokuhlala, futhi ngasikhathi sinye ulahlekelwe isisindo ngaphandle kokusebenzisa umzamo, ngincoma ukuthi unake isimo se-yegilo yegilo. Izinkinga ngohlelo lwe-endocrine ngaphandle kosizo olufika ngesikhathi oluvela kodokotela abaqeqeshiwe kungaholela ekwakhiweni kwe-hyperthyroidism. Lesi sifo siveza iqiniso lokuthi indlala yegilo engenampilo iqala ukukhiqiza ama-hormone amaningi ngokweqile.
Izazi ze-Endocrinologists zikhombe izimpawu eziphambili ze-hyperthyroidism. Kufanele uqale ukukhathazeka uma:
ulahlekelwe ngokushesha kufika ku-10 kg ngesifiso esihle kakhulu,
ukushaya kwenhliziyo kufinyelela ku-120 noma ngaphezulu ukushaywa ngomzuzu,
ngisho nasemakhazeni ufunga kakhulu
ukuthuthumela okungalawuleki kwiminwe
ukungasebenzi ngocansi kuyabonakala.
Ekubonakalisweni kokuqala kwalezi zimpawu, ngincoma ukuxhumana ngokuphuthumayo nodokotela we-endocrinologist. Ukungenelela ngesikhathi esifanele kwezokwelapha kungavimba i-hyperthyroidism noma kumise lesi sifo esigabeni sokuqala.
Kubhekwa njengesinye sezifo ezingathi sína nezingabonakali ezibangela ukwehla kakhulu kwesisindo. Ukubonakaliswa kokuqala kwalesi sifo kuwukudla okungavinjelwanga ngokunciphisa umzimba kanyekanye.
Isifo sikashukela sinqunywa izivivinyo zaselebhu. Izimpawu zalo ukoma okungalawuleki ngokuhlala kungaphatheki kahle kanye nokuphefumula kabi, kukhipha i-acetone. “Iphunga” elifanayo lizwakala lapho uchama. Ngaphezu kwalokho, isifo esiyingozi sihambisana nokuphelelwa yithemba kwesikhashana.
Ngiyabona ukuthi akukho bunzima, ngaphandle kokwehla kwesisindo okungenangqondo, obonwa esigabeni sokuqala sokugula. Indoda ilahlekelwa amakhilogremu, idla kanzima futhi imunca uketshezi oluningi.
Ngakho-ke, uma uzithola unezimpawu ezisohlwini olungenhla, ngincoma ukuthi uphuthume egumbini lokucwaninga eliseduze futhi unikele ngegazi ukuze lihlaziywe. Uma izinga likashukela kulo lidlula inani elivumelekile, ngiyaxolisa, unesifo sikashukela!
Ngiseyingane, umama wangethusa: “Musa ukuzenzisa izinja ezidukelayo, uma kungenjalo uzobamba izikelemu!” Kodwa-ke, amachaphaza angena emzimbeni womuntu hhayi ezilwaneni eziphambukayo kuphela. Ukuthola ubukhona babo kuzosiza ucwaningo lwelabhoratri lwe-anal smear noma ukuhlaziya izindle.
Uma wehlisa umzimba ngaphandle kwesizathu, ngincoma kakhulu ukulalela imizwa yakho yangaphakathi:
Ukwehla kwesifiso sokudla kubonisa ukuthi kukhona emzimbeni we izivakashi ezingafuneki ezimelwe ukuhlaselwa kwe-helminthic,
ukulunywa, kuhambisane nemizwa engakhululekile ezungeze i-anus, kusikisela into efanayo
izimuncagazi zingadala ubuthakathaka obungapheli, obungahambi ngemuva kwamahora wokuphumula,
ukuphazamiseka kokugaya ukudla, okuhambisana nokuqunjelwa noma isifo sohudo, kuwuphawu lobukhona bezidalwa zangaphandle emzimbeni.
Ngaphezu kwezimpawu ezingenhla, ukuba khona kwezihlaseli ze-helminthic kungabonakala njengokwenyuka kwezinga lokushisa okungenazizathu. Ngokuphendula okuhle okuvela elabhoratri mayelana nokuba khona kwezifo emzimbeni, odokotela batusa ukuthatha izidakamizwa ze-anthelmintic.
Into elandelayo esehlisa isisindo ngendlela exakile yisifo esibulalayo esibangelwa isimila esibuhlungu. Ngeshwa, ngisho nokukhanyiselwa okuqashelwayo kwe-oncology akufundanga ekuqaleni ukubona lokhu kugula. Ukuhlolwa okuphelele kwezokwelapha okunenqwaba yokuhlolwa okunganquma isifo esiyingozi.
I-neoplasm enobungozi iphipha amandla abalulekile adingeka kakhulu emzimbeni, okubangela ukulahleka kokudla, okuhambisana nokuncipha kwesisindo, ukulahleka komthamo wokusebenza kanye nokunye ukubonakaliswa okungajabulisi komdlavuza. Ukuqashelwa ngesikhathi sokwethuka kwe-oncological kulezi zigaba zokuqala kwenza ukuthi kuthathe izinyathelo ezifanele zokuyelapha, kuze kube nokungenelela kokuhlinzwa.
Lapho owesilisa, ikakhulukazi osemusha, eqala ukunciphisa umzimba ngokungenangqondo, ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa mhlawumbe yimbangela. Umsebenzi owenziwe ngokweqile, ushintshana ngesimo esivumelana ngokuphelele, ukuthokozisa ngokweqile kukhombisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezingavunyelwe.
Ukushintshwa kwemetabolism efanelekile ngenxa yokuphazamiseka kokugaya ukudla okubangelwa i-gastritis noma isilonda sesisu nakho kuholela ekulahlekelweni kwesisindo.
Futhi uma wehlisa isisindo ngaphandle kwesizathu Ngincoma ukuhlolwa kwezifo emzimbeni. Ama-x-ray noma amandla we-fluorography afunekayo avumela ukutholwa kwesifo sofuba ngokushesha. Ngiyabona ukuthi iziguli ezinalesi sifo kufanele zihlukaniswe nabanye ukuze kugwenywe ukutheleleka okungenzeka.
Imithombo yezindaba yanamuhla neminye imithombo igcwele imininingwane eminingi yengculazi. Ngakho-ke, esimweni sendatshana yami, ngibona kuphela ukuthi abantu abatheleleke nge-HIV bathambekele ekwehliseni isisindo ngokushesha.
Ngakho-ke, ucwaningo lwami luveze ukuthi noma ngabe zithini izidingo zokuncipha kwesisindo, isizathu silele ezinkingeni zezempilo. Ngakho-ke, akufanele ngaso sonke isikhathi ukuthokozela ekulahlekelweni okusheshayo kwamakhilogremu, noma kunjalo kungabonakala njengokufiselekayo. Ngaphezu kwalokho, i-anorexia ngeke ikwenze ube umuntu ojabulayo, kodwa izoyiguqula ibe isikhumba esimbozwe ngesikhumba.
Ukunciphisa isisindo ngokuhlakanipha nempilo enhle kuwe!
Uma uthola lolu lwazi lusebenza, wabelane ngalo nabanye.
Imvamisa, ukwehla kwesisindo kwenzeka ngenxa yemikhawulo enzima yokudla. Isibonelo, indoda ekhuluphele ihlala ekudleni okuqinile.Kulokhu, ukwehla kwesisindo esikhulu kunazo zonke kwenzeka emavikini okuqala nasezinyanga zokuncipha kokudla kwe-caloric. I-Liquid ishiya umzimba bese isisindo sehla kakhulu. Lokhu kwenzeka okwemvelo. Ngokuzayo, inqubo yokulahlekelwa isisindo iyaqina. Kuyadingeka ukuthi uqinisekise ukuthi ukwehla kwesisindo enyangeni yokuqala yokudla akudluli kuma-5-6 kg.
Ngokukhuluphala, ukudla okulandelayo kufanele kugwenywe:
Ukudla kombala (ukudla umbala ofanayo),
ukuthatha imishanguzo yokwehlisa isifiso sokudla,
ukwenqatshwa ngokuphelele kasawoti, ushukela, amaprotheni, amafutha noma ama-carbohydrate.
Ukudla okunjalo kungaholela ekuphazamisekeni okunamandla kwe-metabolic. Ubuthakathaka bemisipha, ukonakala kwamathambo, izipikili nezinwele, ukudangala kwengqondo, ukuphazamiseka kokugaya ukudla kwenzeka. Ngaphezu kwalokho, kuvela izinkinga zobuhle: amamaki welula, isikhumba esiqabulayo, kunzima ukuyiqeda ngokwakho futhi kufanele usebenzise udokotela ohlinzayo wepulasitiki. Ngakho-ke, ngisho nokukhuluphala kakhulu, ukudla kufanele kube okuphelele, futhi ukuncipha kwesisindo kufanele kube kancane kancane.
Ukwehla kwesisindo ngenxa yengcindezi
Imvamisa ukwehlisa isisindo kuhlotshaniswa nokuqina ngokweqile kwengqondo. Ezimweni ezinjalo, abantu banombuzo wokuthi kungani nginciphisa isisindo ngaphandle kwesizathu ngokudla okujwayelekile. Ukwehla kwesisindo ngesikhathi sokuxineka kuhlotshaniswa nokukhiqizwa okwandayo kwama-hormone: i-cortisol, i-adrenaline, i-norepinephrine. Lezi zinto zithinta isikhungo sendlala, okuholela ekunciphiseni okukhulu kwesifiso sokudla. Ngakho-ke, indoda esesimweni sokudangala ayifuni ukudla nhlobo.
Ngaphezu kwalokho, ama-hormone e-adrenal cortex aholela ekushisweni ngokushesha kwamafutha. Ngaphansi kwengcindezi, umzimba uphelelwa amandla, bese uqala ukubuyisa futhi amakhalori ezinsizakalweni zawo. Ngenxa yalokhu, umuntu wehlisa isisindo ngisho nangondlekile.
Izimpawu ezilandelayo zokugula ngokweqile kwe-psycho-ngokomzwelo zingahlukaniswa:
Kumele kukhunjulwe ukuthi ngokuxineka kwengqondo, umzimba udonsela amandla okugcina ama-adipose nezicubu zemisipha. Ukwehla okunjalo kwesisindo akubonakali kuphela ngokuncipha kwesisindo somzimba, kepha futhi nangokwe-flabbiness kanye nobuthakathaka bemisipha. Ama-hormone okuxineka enza ukuba kube nzima ukukhiqizwa kwe-testosterone. Ngakho-ke, uma uhlangabezana nezimpawu zokuphamba ngokweqile kwengqondo, kufanele uthinte owelaphi.
Izimbangela zokuncipha kwesisindo emadodeni zingahlotshaniswa nokuluthwa kwemikhuba emibi. Ezimweni ezinjalo, isisindo somzimba asilahleki ngokushesha. Lokhu kwenzeka kwababhemayo nabadakayo abanokuhlangenwe nakho, lapho kungenjalo ngokwengqondo kuphela, kepha futhi kuncike emzimbeni.
Ekuqaleni, ophuzayo angathola nesisindo. Lokhu kungenxa yokuqukethwe kwekhalori ephezulu yotshwala. Ukuphuza iwayini ne-vodka kungavusa isifiso sokudla. Kepha njengokwethembela kwamakhemikhali amafomu wotshwala, i-ethanol ihlanganiswe nomzimba we-metabolism. Utshwala buthinta i-metabolism yamafutha, umzimba ukhipha amanzi futhi uyeke ukumunca izakhamzimba. Kwabesilisa abahlushwa isigaba 2 sotshwala, kukhona ukwehla okunamandla kwesisindo somzimba.
Ngokuqondene nokubhema, ugwayi udala umuzwa ongamanga wokuthambisa. Ngenxa yalokho, indoda iqala ukudla ukudla okuncane. INicotine iwuthinta kabi uhlelo lokugaya ukudla, ngenxa yalokhu, amakhalori ambalwa nezakhi ezingena emzimbeni. Ukubhema kuholela indlala yomoya-mpilo, ngenxa yalokho, inqubo yokufakwa kwamafutha iyancipha. Konke lokhu kungadala ukunciphisa umzimba ngokushesha.
Imvamisa abesilisa abayeki ukubhema ngenxa yokwesaba ukuthola isisindo somzimba ngokweqile. Kodwa i-nicotine ayikwazi ukuba yindlela yokulwa nesisindo ngokweqile. Imvamisa umuntu ngemuva kokuyeka umkhuba omubi uzuza okungadluli kuma-3-4 kg ngonyaka. Lokhu kungenxa yokuthi i-metabolism yaphazamiseka ngokusetshenziswa njalo kwe-nicotine. Ngokudla okufanele nokuphila ngendlela esebenzayo, ukukhuluphala kwesisindo kubalulekile akwenzeki.
Izimbangela zokuncipha kwesisindo zingahlotshaniswa nokutheleleka ngezibungu. Lokhu kuhlasela kwenzeka lapho kudliwa inyama engacoliswanga kahle, ngezandla ezingcolile, nangokuxhumana nezilwane ezifuywayo. Amadoda amaningi ayakuthanda ukudoba, ukulungiselela okungafanele kokutheleleka kwezinhlanzi ngama-helminths kungenzeka kakhulu. Imvamisa umuntu akahlobisi ukwehla kwesisindo okungazelelwe nokudla umkhiqizo ngomuthi owanele wokushisa, izimpawu zokutheleleka azibonakali ngokushesha. I-parasite engena emzimbeni idla izakhamzimba, ngenxa yalokho, umuntu uncipha isisindo somzimba. Izimpawu ezilandelayo kufanele ziqwashise:
ukushesha emzimbeni okubangelwa yi-allergy kuya kumikhiqizo yokungcola ye-helminths.
Uma usola ukutheleleka ngegciwane, kubalulekile ukuthi uhlolwe bese uphasisa indle yamaqanda we-helminth. Ungazenzisi, ezinye izinhlobo zezikelemu ziyingozi enkulu kakhulu. Isibonelo, ikati elibusayo libanga ukulimala okukhulu kwesibindi, lolu hlobo lwezibungu lungatheleleka ngokudla izinhlanzi zasemfuleni. Isikhathi sokufuduka singaba isikhathi eside, kwesinye isikhathi ukulahleka kwesisindo okubukhali kuba uphawu lokuqala lwesifo.
I-Hyperthyroidism (hyperthyroidism) ihambisana nokuncipha kwesisindo. Ukusebenza kanzima kwalo mzimba kuholela ekuhlanganiseni ngokushesha kwamafutha. Ngasikhathi sinye, ukubonwa okwandayo kuyabonakala, futhi abanye abaqondi ukuthi kungani umuntu anciphisa isisindo ngokudla ukudla okuningi. Ubuhlungu kungenye yezimpawu zalesi sifo, futhi kwesinye isikhathi kubukeka sengathi owesilisa ubambekile ekucindezelekeni. Ezinye izinkomba ze-hyperthyroidism zingahlukaniswa:
Amehlo wokugoqa (exophthalmos),
i-go apple ku-aphula ka-Adamu,
amabala abomvu ebusweni,
Uma ukunciphisa umzimba kuhambisana nezimpawu ezinjalo, khona-ke udinga ukuxhumana nodokotela we-endocrinologist futhi uhlole igazi lamahomoni e-thyroid.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, ukwanda kwesisindo somzimba kuvame ukubonwa. Kepha ezimweni ezingama-20%, ukwehla kwesisindo kwenzeka. Indoda ingalahlekelwa kuze kufike ku-20 kg ezinyangeni ezi-1-1,5. Ngenxa yokushoda kwe-insulin, umzimba uthola amandla amancane bese uqala ukusebenzisa izicubu ze-adipose.
Isifo sikashukela sihambisana nezimpawu ezinjengokomela, ukuhogela i-acetone ephuma emlonyeni, isikhumba esikhanyayo, ukulahleka okungazelelwe kwengqondo. Uma kwenzeka lezo zimpawu, kufanele uthintane nodokotela wakho we-endocrinologist futhi uhlole i-glucose. Esigabeni sokuqala sesi sifo, ukunciphisa umzimba kungaba ukuphela kokubonakaliswa.
Ukwehla kwesisindo kuvame ukuhlotshaniswa ne-gastroenterological pathologies. Nge-gastritis, isilonda esiswini, i-cholecystitis, ukwehla kwesisindo kungabonakala ngokushesha. Lokhu kungenxa yezizathu ezilandelayo:
Ngenxa yokuvuvukala, i-epithelium yesistimu yokugaya ukudla ayihambisani nomsebenzi wayo. Ukudla akugayiwe, futhi umzimba awutholi izakhamzimba.
Izifo zokugaya zivame ukuhambisana nokuhlanza okuphindaphindayo, okuholela ekuwohlokeni komzimba.
Ngenxa yobuhlungu obukhulu esiswini, isifiso sokudla siyancipha, futhi umuntu akakwazi ukudla ngokuphelele.
Kuyadingeka ukubonana nodokotela we-gastroenterologist. Udokotela uzonquma ukudla okungaqedi okuzohlinzeka umzimba ngazo zonke izinto ezidingekayo.
Ngaphezu kwalokho, izifo zokugaya zingahambisana nezinye izifo: isifo sikashukela, isimila, i-hyperthyroidism, okuholela ekunciphiseni isisindo.
Imvamisa umuntu uncipha isisindo ngezifo ezithuthukile zohlelo lokugaya ukudla. Kepha kwesinye isikhathi ukwehla kwesisindo kwenzeka ezigabeni zokuqala zesifo. Indoda ayikabuzwa ubuhlungu obukhulu esifundeni se-epigastric, kepha ukungakhululeki esiswini kuholela ekulahlekelweni kwesifiso sokudla. Ukwehla okuncane kodwa okungaguquki kwesisindo somzimba kungaba uphawu lwama-pathologies wesisu.
Ngamathumba amlimazayo, ukuncipha okubukhali kuvame ukubonwa ezigabeni ezi-3 zesifo. Ama-Neoplasms athatha izakhi zomzimba emzimbeni. Amasosha omzimba kufanele asebenze ngemodi ethuthukisiwe ukubuyisa imisebenzi elahlekile yezitho nezinhlelo. Iziguli zomdlavuza zivame ukuba nokungondleki kanye nokuqina kobuhlungu, ngisho nokudla okuhle.
Ama-tumor we-esophagus nesisu aphazamisa ukusetshenziswa okujwayelekile kokudla. Umuntu uphoqwa ukuthi adle okuncane futhi anciphise isisindo. Izimbangela zengqondo zifaka isandla ekunciphiseni isisindo. Lapho ezwa ngokuxilongwa okunzima, umuntu uyadangala, okuhambisana nokuncipha kokudla.
Kodwa-ke, ukunciphisa umzimba akuvamile ukwenzeka ezigabeni zakamuva zesifo. Kwesinye isikhathi ukwehla kwesisindo somzimba kuwuphawu lokuqala lwe-oncological pathology eseqalile. Isibonelo, ezigabeni zokuqala zomdlavuza wamaphaphu, i-esophagus, i-pancreas, ukunciphisa isisindo okungenasizathu kungaba ukuphela kwempilo kwalesi sifo. Ama-tumor alezi zinto ezibucayi zezitho ezithikameza umzimba, futhi ukuncipha kwesisindo kuhlotshaniswa nalokhu. Ngemuva kokususwa kwe-neoplasm, umuntu uphinde athole isisindo.
Ngakho-ke, indoda ekhathazekile ngombuzo wokuthi kungani nginciphisa isisindo ngaphandle kwesizathu idinga ukuvakashela udokotela futhi ihlolwe. Lokhu kuyadingeka ekutholakaleni kokuqala kwe-pathology. Ezigabeni zokuqala, umdlavuza kulula kakhulu ukuselapha. Izizathu zokuncipha kwesisindo zingaba kude nezingenangozi.
Ukwehla kwesisindo okuphawuleka kakhulu kubonwa ngesifo sofuba samaphaphu. Lesi sifo siholela ekunciphiseni okukhulu kwesifiso sokudla. Ngaphezu kwalokho, umzimba udakwa kakhulu, okuthinta umzimba. Isisindo silahleka ngokushesha, kuze kufike ku-10-15 kg ngesikhathi esifushane.
Ukwehla kwesisindo kwenzeka nezinye izifo ezithathelwanayo: i-brucellosis, i-amoebiasis, i-mononucleosis, ukutheleleka nge-HIV, ukutheleleka nge-Escherichia coli. Ngakho-ke, ngokuncipha kwesisindo okungazelelwe, kungadingeka ukuthi uthinte uchwepheshe wezifo ezithathelwanayo.
Ukwehla kwesisindo okubukhali emadodeni: izimbangela, izimpawu, ukuxilongwa, ukuhlolwa kanye nezeluleko zokwelashwa eziphoqelekile
Wonke umuntu angathanda ukuba nesibalo esihle futhi alahle amakhilogremu amaningi. Lesi sitatimende sisebenza kubo bobabili abesifazane kanye nobulili obuqinile. Imiphumela emihle ekunciphiseni isisindo ingatholakala ngokudla kahle nokuqeqeshwa kwezemidlalo. Kodwa kwesinye isikhathi abantu babhekene nesimo lapho isisindo somzimba sehla ngaphandle kwethonya lezimo zangaphandle. Kamuva esihlokweni sizokhuluma ngezimbangela zokuncipha kwesisindo ngokushesha kwabesilisa nokuthi yini okufanele yenziwe lapho kuvela inkinga enjalo.
Akunandaba ukuthi yiziphi izinto ezenze ukuthi kwehle ngokushesha isisindo somzimba, lo mkhuba ungaholela ezifweni ezinzima. Kulokhu, kubonakaliswa izimpawu zanoma iyiphi i-pathology. Ngaphezu kwalokho, izimbangela zokuncipha kwesisindo esithe xaxa emadodeni ziholela ekujuleni kwenhliziyo.
Yikuphi ukunciphisa umzimba kubhekwa ngokushesha? Impendulo yalo mbuzo incike ezimeni zomuntu ngamunye. Uma indoda inesisindo esingu-150 kg, ukulahleka kwamakhilogremu ayishumi ngezinsuku ezingama-30 akuyona indlela yokugula. Ukwehla kwesisindo okunjalo kuzozuzisa. Kodwa-ke, kwezinye izimo, lesi simo siyingozi. Ukwenza isibonelo, kowesilisa onesisindo esingamakhilogremu angama-60.
Ochwepheshe bathi ngokulahleka kwe-10 kg ngezinsuku ezingama-30, umuntu kufanele afune usizo lodokotela. Ikakhulu uma kukhona ukuwohloka esimweni esejwayelekile. Ukwehliswa okungu-20% kwesisindo somzimba, uma kuqhathaniswa nesisekelo, kusongela impilo nokuphila komuntu. Ngakho-ke, ngokulahleka kwesisindo okukhulu emadodeni, kubalulekile ukuvakashela udokotela ngokushesha okukhulu.
Ukwehla kwesisindo esibalulekile esikhathini esifushane akudluli ngaphandle kokulandela. Umuntu unokuwohloka kwesimo esejwayelekile, okuvezwa kulezi zimpawu ezilandelayo:
Ukubuyiswa kokusebenza ngokweqile, kunciphile amandla okusebenza.
Ukwehla okukhulu kwevolumu yezicubu ezi-subcutaneous.
I-anemia kanye nokushoda kwezinto ezibalulekile.
Ukwehla ukubukeka kwesikhumba (umhlabathi noma umithunzi ophuzi, ukugqekeza, ukubukeka kwemibimbi).
Ukomiswa nokulahlekelwa izinwele, ukushuba kwamapuleti ezipikili.
Ukuvuvukala kwe-mucosa yomlomo.
I-Pathology yohlelo lomchamo.
Ukuphazamiseka komsebenzi wobulili.
Isimo somzwelo esicindezelekile.
Izici Zokunciphisa Umzimba Ezivamile
Yiziphi izimbangela ezivame kakhulu zokunciphisa isisindo ngokuzumayo kubantu besilisa? Phakathi kwazo kukhona izimo ezihlobene nendlela yokuphila engafanele, kanye nezinkinga zempilo. Izici eziyimbangela zokuncipha kwesisindo somzimba kufanele zifakwe kuhlu:
Ubukhona bemilutha, ukuhlukunyezwa kokudla okungenamsoco, ukweqisa ngokomzwelo. Ukudla okungalinganiselwe, ukuba khona kuyo kwenani elikhulu likasawoti, ukudla okuthosiwe, izinongo neziphuzo eziqukethe utshwala kuholela ekuphazamisweni kwemisebenzi yendlela yokugaya ukudla.
Ukuba khona kwamagciwane emzimbeni. Kunenkolelo esabalele yokuthi ukuhlukunyezwa kwe-helminthic kuwuphawu lwabancane kuphela. Kodwa-ke, ukwehla kwesisindo emadodeni ngenxa ye-helminthiasis kuyinto evame ukwenzeka. Ama-parasites angena emzimbeni womuntu ngenxa yokungahambelani namazinga okuhlanzeka, ukusetshenziswa kwezitsha zenyama noma zenhlanzi ezingakaze zithole ukwelashwa okufanele kokushisa. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubathandi benyama enosiwe ephansi, kanye ne-sushi nezinye izitsha zaseJapan.
Ukuba khona kwe-neoplasms enobungozi. Ukwehla okukhulu kwesisindo somzimba, umuzwa wokuba buthakathaka, ukulahleka kokudla kanye nokwehla kwekhono lokusebenza - zonke lezi zibonakaliso zingakhombisa ukuthuthukiswa kwesimila somdlavuza.
I-Pathology yesistimu yokugaya ukudla. Lokhu kufaka phakathi izilonda zesisu, izinqubo ezingapheli zokuvuvukala esiswini, i-pancreatitis, izifo zesibindi ne-bile ducts. Lokhu kugula kunomthelela ekulahlekelweni kwesifiso sokudla kanye nokumuncwa kabi kwezakhi zomzimba.
Isifo sofuba sohlelo lokuphefumula (amaphaphu, i-trachea). Manje, ukuvimbela i-pathology, izivivinyo ezijwayelekile zezingane nabadala ziyaqhutshwa. Uma umuntu etholakala enalesi sifo, uthunyelwa e-dispensary, lapho kwenziwa khona ukwelashwa isikhathi eside. Ngokuya ngokuxilongwa kusenesikhathi, isifo sofuba siyelapheka.
Isifo sikashukela mellitus. Lokhu kugula kuhlotshaniswa nokuntuleka kwe-insulin.
Ukwephulwa kwemisebenzi yezitho ezibalulekile, okuholela ekushetshisweni komzimba.
Ama-pathologies adluliswa ngokuxhumana okusondelene. Isifo esijwayelekile futhi esiyingozi ingculaza.
Ukuphazamiseka kwengqondo, izinkinga zokudla.
Ukuhlala noma ukusebenza endaweni enemisebe eyeqile.
Phakathi kwezimbangela zokuncipha kwesisindo okungazelelwe emadodeni, ochwepheshe babiza izici ezihambisana nokudla okungafanele.
Njengezimo ezinjalo, ungafaka kuhlu:
Ukudla, kubandakanya nokwelashwa. Ukwehla okukhulu kwesisindo somzimba kuleli cala kungahlanganiswa nezimpawu zomzimba ngamunye.
Ukusetshenziswa kokudla okuseqophelweni eliphansi (ukudla okusemathinini, ama-noodle namazambane abunjiwe ngokushesha).
Ukwephulwa kokudla ngenxa amashejuli amatasa.
Ukushintshwa okubukhali ekudleni okudla imifino noma okuluhlaza.
Ukugujwa kokudla kwenkolo isikhathi eside.
Ukwelashwa ngemithi ethile nakho kuvame ukuholela ekunciphiseni kwesisindo okukhulu emadodeni.
Izizathu ezenza ukuthi isisindo somzimba sehle ngokushesha zivame ukuwa ekulahlekelweni kwesifiso sokudla lapho usebenzisa izindlela ezilandelayo:
Ama-hormone aqeda ukungasebenzi kwe-thyroid.
Kusho ukwelashwa kwe-pathologies yomdlavuza.
Izidakamizwa ezivusa umsebenzi wobuchopho.
Uyacelwa uqaphele ukuthi uma udokotela ekucacisa ukuthi yiliphi ikhambi, kufanele ulandele imiyalo yakhona.Iqiniso ngukuthi kwezinye izimo, isisindo sabesilisa abaphuza le mithi sincipha kakhulu, ngokunembile ngenxa yomthamo ongalungile noma isikhathi eside sokwelashwa.
Imiphumela emibi yezinto eziyingozi eziqukethwe emikhiqizweni equkethe utshwala nogwayi yizinto ezibangela ukunciphisa isisindo. INicotine ikhulisa ukumuncwa kwezinto ezibalulekile, icasule ukulahleka kwesifiso. Iziphuzo eziqukethe i-ethanol zibangela ubuthi, ziphazamise ukusebenza kwendlela yokugaya ukudla kanye nemetabolism. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa nakho kuyimbangela yokuncipha okukhulu kwesisindo emadodeni. Lokhu kumlutha kubangela ukwehla kokumelana komzimba, ukulahleka kokudla kanye ne-atrophy yemisipha.
Kukholelwa ukuthi ubulili obuqine kakhulu kulula kakhulu ukubhekana nezehlakalo ezihlukumezayo empilweni kunabesifazane. Kodwa-ke, umzimba wesilisa nawo uyathinteka ukushaqeka okuhlukahlukene kwengqondo. Futhi ukweqisa ngokomzwelo kuvame ukuhambisana nokulahlekelwa isifiso sokudla. Umzimba womuntu kuleli cala uphoqelelwa ukuba wenze ukuntuleka kwezakhi zomzimba ezakhiweni zawo (izicubu zomzimba we-adipose nezicubu zomzimba).
Isimo eside sokucindezela singavusa ukudana. Ungakubona lokhu kugula uma unezimpawu ezilandelayo:
ukungakhululeki endaweni yesifuba,
ukwehla kwamandla okwenza, ukukhubazeka kwememori,
ukulahleka kokuya ocansini,
Uma imbangela yokulahleka kwesisindo okungazelelwe endodeni kungaphezu kobunzima obungokomzwelo, kufanele uthinte uchwepheshe. Amakhambi anomphumela wokuthoba nezidakamizwa zokucindezelwa asiza ukubhekana nale nkinga.
Lokhu kuphazamiseka kutholakala kwabesifazane nabesilisa. Kungasolwa lapho kunezimpawu ezilandelayo:
Yehliswe isifiso sobulili.
Ukwesaba nokwanda kokuqina.
Unciphise amandla emisebenzi yokuqonda.
Ukuphazamiseka kwemisebenzi yezitho ezibalulekile kubhekwa njengezinto ezibangela ukunciphisa umzimba ngokweqile. Kumadoda, izimbangela zalokhu zivame ukuba yi-pathologies ye-gland yegland kanye nezindlala ze-adrenal.
Ngakho-ke, i-hyperthyroidism (isimo esidalwa ukukhiqizwa okwandayo kwe-thyroxine) ihambisana nokuncipha kwesisindo ngokumelene nesizinda sokudla okuvamile, ukushaya kwenhliziyo okusheshayo, ukuphuma kwesithukuthuku, imilenze ethuthumela, nokuqwasha. Esinye isizathu sokunciphisa isisindo ukwephula izindlala ze-adrenal. Izimpawu zifaka ubuthakathaka bemisipha, ukuncipha kwegazi, izinkanuko zokudla okunosawoti, ithoni yesikhumba emnyama nokungajabuli emgodini wesisu.
Kwesinye isikhathi ngesidingo esengeziwe sokudla, ukuncipha kwesisindo kwenzeka ngokushesha. Isizathu samadoda, kanye nabesifazane, kungenzeka kube ukuntuleka kwe-insulin. Kumayelana nesifo sikashukela.
Lesi simo sihambisana nezimpawu ezinjalo:
umlomo owomile nokoma okukhulu,
iphunga le-acetone elisuka emgodini womlomo.
Kubangela ukwehla kwesisindo ngokushesha. Izizathu zamadoda zingaba ukuphazamiseka okuhlukahlukene kohlelo lokugaya ukudla.
Imvamisa, ukwehla kwesisindo kwenzeka ngokuvuvukala kwamanyikwe, okuhambisana nokugabha, ukuminyanisa emgodini wesisu, ukuphuma kwesithukuthuku kanye nesikhumba esimpunga.
I-gastritis futhi isho ukugula kwesisu. Kubonakala ngokungaphatheki kahle esiswini esingaphezulu, isicanucanu, ukwakheka kwe-plaque ebusweni bolimi, ukushisa kwenhliziyo. Ukuphazamiseka emsebenzini wamathumbu kuhambisana nesifo sohudo, ukugcwala komhlaba kanye nokugcinwa kwesitulo.
Ukwehla kwesisindo emadodeni ngemuva kokumuncwa izinambuzane kubonakaliswa ukulahleka kwesifiso sokudla, umuzwa wobuthakathaka, ukuhlanza, umkhuhlane, ukulunywa ku-anus, nokulahlekelwa izinwele.
Isifo sofuba kungenye yezifo eziyingozi kakhulu. Kunzima ukwelapha. Phakathi kwezimbangela zokuncipha kwesisindo okungazelelwe emadodeni, enye yezimbangela ezivamile yilesi sifo.
Abantu abanomlutha wezidakamizwa notshwala, iziboshwa, nabantu abanokuntuleka kokudla okunempilo bathinteka kakhulu yisifo sofuba.
Ukutheleleka kubonakaliswa ukungaphatheki kahle esifubeni, ukukhwehlela okukhwehlela ngesikhwehlela nezinhlayiya zegazi, ukujuluka ngokweqile, umkhuhlane kanye nobuthakathaka.
Ukwehla kwesisindo kungabangelwa futhi inqubo yokuvuvukala emaphashini - inyumoniya. Ngokungafani nesifo sofuba, le ndlela yesifo sokugula ayinaso isikhathi esingapheli, kodwa inkambo ebuhlungu.
Amakhansela nawo ajwayele ukuchaza ukuthi kungani amadoda ancipha isisindo. Lokhu kugula kuhambisana hhayi ngokuncipha okukhulu kwesisindo somzimba, kepha nezinye izimpawu. Izimpawu zincike kusitho lapho i-neoplasm yakheka khona.
Iziguli zihlushwa ukubonakaliswa okuhlukahlukene. Kungaba:
Ukuphazamiseka kwephakethe lesisu.
Ukulahlekelwa isifiso sokudla.
Ukuphulukiswa isikhathi eside kwezilonda zesikhumba.
Zonke iziguli ezine-pathologies ye-oncological zibhekana nokuqaqanjelwa, izinwele ezi-brittle kanye namapuleti ezipikili, kanye nokukhanya kobuso.
Ngeshwa, amadoda ahlala evakashela udokotela. Uma beya esibhedlela, odokotela abasakwazi ukwenza lutho.
Enye yezinto ezinomthelela ekunciphiseni isisindo ukuphazamiseka kokudla (i-anorexia). Kwenzeka, njengomthetho, emadodeni nasezinsizweni. Isizathu sokukhula kwalesi sifo kubantu abamele ubulili obunamandla sivame ukugula ngengqondo (ukudangala, ukuphazamiseka kwengqondo).
I-Anorexia yisimo lapho umuntu engatholi umsoco owanele ngenxa yokwenqaba ukudla.
Kwesinye isikhathi abesilisa baphendukela ekudleni ngenxa yomsebenzi wefashini imodeli, umculi. Imvamisa isizathu siyizitatimende zontanga mayelana nokugcwala kwentsha. I-anorexia iyingozi ngoba ivusa ukungasebenzi kahle kwezitho nezinhlelo zomzimba, okuholela ekufeni.
Okunye ukuphazamiseka kwengqondo okungathi sína kwengqondo okuyi-senile. Ngokuvamile kwenzeka ngemuva kweminyaka engama-65. Kepha ngesinye isikhathi lesi sifo sihluma kubantu abaneminyaka ephakathi. Ngokuvamile kubangela ukwehla kwesisindo emadodeni angaphezu kweminyaka engama-40. Iqiniso ngukuthi iziguli ezinokuwohloka komqondo i-senileia azikwazi ukuzenzela zona, kubandakanya nokudla ngesikhathi. Abantu abanjalo kufanele bagadwe njalo yizihlobo noma ngabasebenzi bezokwelapha.
Ukwehla kwesisindo okubukhali kuwuphawu oludinga udokotela. Ngemuva kokuhlolwa, ungabona imbangela yokulahleka kwama-kilogramu.
Ukuze uthole ukululama, ukudla okufanele kubaluleke kakhulu. Kufanele udle kancane, kepha kaningi. Imikhiqizo kufanele ibe lula, kepha ibe nezinto ezidingekayo zomzimba. Imenyu yansuku zonke kufanele ifake izitsha zobisi, imifino, izithelo, inhlanzi nezitsha zenyama. Ngokuya ngomuthi kadokotela, izithasiselo zamavithamini, izidakamizwa zokuthuthukisa ukugaya, izidakamizwa ezinomphumela wokuthoba, nezidakamizwa ezivusa iphango kumele zithathwe. Uma kwenzeka ukukhathala okungathi sína, ama-dropper kanye nemijovo asetshenziswa esibhedlela.
Sanibona, bafundi abathandekayo, ngisebenzisa ucwaningo lwami namuhla emadodeni futhi ngifuna ukubheka kabanzi ukwehla kwesisindo okubukhali emadodeni, izimbangela zokuvela kwayo nokuthi ungaqala nini ukukhala i-alamu. Ucwaningo lwami luzosiza ekunqumeni izinga lobungozi bezempilo lokwehla ngokushesha kwesisindo.
Yize kunenkolelo yokuthi ubulili obuhle bukhokha kakhulu ukubukeka kwayo, abamele banamuhla bengxenye eqinile yesintu nabo abahlukani nesifiso sobuhle.Ukuphelela ngesimo somzimba kuwuphawu lokuqala lokubonakala kahle.
Ngakho-ke, iningi lethu, kungakhathalekile ngobudala kanye nobulili, senza imizamo eminingi yokususa amakhilogremu angeziwe aqalwa ngenxa yokungondleki kahle nokuphila impilo yokuhlala phansi. Kodwa-ke, kulesi sihloko sizokhuluma ngenkinga ephambene ngokuphelele.
Uma ulahlekelwa ngokushesha ngekhilogremu ngekhilogremu ngaphandle kwamandla, kufanele ucabange ngokunakekelwa kwezokwelapha. Ungajabulisa ukuthamba, okuyiphupho lokugcina, kepha isithombe esihle asibonisi inhlalonhle ejwayelekile. Okulandelayo, ngizobheka izimfanelo eziphambili zokunciphisa umzimba obukhali ebulilini obunamandla.
Abantu abaningi bangathanda ukunciphisa umzimba. Kodwa-ke, ukwehla kwesisindo okubukhali akunakubhekwa njengokujwayelekile, izimbangela zamadoda zokunciphisa umzimba zingahluka. Lokhu akuhlotshaniswa njalo nemikhawulo yokudla; ​​imvamisa umuntu udla ngokugcwele, kepha asheshe alahlekelwe amakhilogremu.
Imvamisa, ukwehla kwesisindo kwenzeka ngenxa yemikhawulo enzima yokudla. Isibonelo, indoda ekhuluphele ihlala ekudleni okuqinile. Kulokhu, ukwehla kwesisindo esikhulu kunazo zonke kwenzeka emavikini okuqala nasezinyanga zokuncipha kokudla kwe-caloric. I-Liquid ishiya umzimba bese isisindo sehla kakhulu. Lokhu kwenzeka okwemvelo. Ngokuzayo, inqubo yokulahlekelwa isisindo iyaqina. Kuyadingeka ukuthi uqinisekise ukuthi ukwehla kwesisindo enyangeni yokuqala yokudla akudluli kuma-5-6 kg.
Ukudla okungajwayelekile kuholela ekulahlekelweni kwesisindo okubukhali.
Umphumela wokuncipha kwesisindo - ukucindezelwa
Ukwehla kwesisindo okubukhali kungathinteka ngokubhema kanye notshwala.
Ukutheleleka nge-Helminth kungasiza ekunciphiseni isisindo
Imvamisa umuntu uncipha isisindo ngezifo ezithuthukile zohlelo lokugaya ukudla. Kepha kwesinye isikhathi ukwehla kwesisindo kwenzeka ezigabeni zokuqala zesifo. Indoda ayikabuzwa ubuhlungu obukhulu esifundeni se-epigastric, kepha ukungakhululeki esiswini kuholela ekulahlekelweni kwesifiso sokudla.Ukwehla okuncane kodwa okungaguquki kwesisindo somzimba kungaba uphawu lwama-pathologies wesisu.
Uma indoda ibona ukuthi isisindo sayo sincishiswe kakhulu, kuyadingeka ukuthi ihlolwe ngokuphelele emzimbeni. Futhi kuphela ngemiphumela ejwayelekile yazo zonke izivivinyo, singaphetha ngokuthi ukunciphisa umzimba kuhlotshaniswa nokudla okungenampilo noma ukucindezela. Kulokhu, ukuqokwa kokudla kilojoule ephezulu nezindlela zokuphila kuzodingeka.
Asfandiyarova, Naila Heterogeneity wohlobo 2 sikashukela mellitus / Naila Asfandiyarova. - M: I-LAP I-Lambert Academic Publishing, 2013 .-- 164 k.
I-Bessessen, D.G. Ukhuluphele kanye nokukhuluphala. Ukuvimbela, ukuxilonga kanye nokwelashwa / D.G. Ayinamandla. - M.: Binom. I-Laborator of Knowledge, 2015. - 442 c.
UKogan-Yasny, V.M. Isifo sikashukela / V.M. UKogan Yasny. - M: Umbuso ukushicilela indlu yezincwadi zezokwelapha, 2006. - 302 c.
Izimbangela eziyisisekelo zokunciphisa umzimba
Ukwehla kwesisindo okwejwayelekile kubizwa nge- cachexia noma ukukhathala. Imvamisa, isisindo somzimba sincipha ngenxa yokungondleki noma ukungondleki, ngokwephula ukuthathwa kokudla, ngokuwohloka okuthe xaxa kwama-carbohydrate, amafutha kanye namaprotheni emzimbeni, noma ngezindleko zamandla ezengeziwe.
Ngaphezu kwalokho, ukwehla okubukhali kwesisindo ngokudla okunempilo kanye nokudla okumnandi kuwubufakazi obusobala balesi sifo. Ukwehla kwesisindo kungavela kusuka ku:
Ukuvinjelwa kokudla. Le nkinga ivela ngenxa yokungazi kahle komzimba ngenxa yokulimala kobuchopho obuthile, lapho kunesimila, imivimbo, ukuncipha kwe-esophagus noma i-larynx, i-anorexia nervosa, ukuncipha kokudla, ukudakwa.
Ukuqunjelwa. Izibonakalisa kwisifo se-peptic ulcer, atrophic gastritis, colitis, hepatitis, pancreatitis, enteritis, cirrhosis. Kuhambisana nokumuncwa kwezakhi zomzimba kanye nokugaya okulandelayo kwamafutha namaprotheni.
Vele, ukuqala ukugijima, iya ejimini noma echibini, amadoda avame ukunciphisa umzimba. Lokhu kungenxa yemiphumela ye-testosterone, evusa ukushiswa kwamafutha omzimba.
Kepha kwesinye isikhathi abantu abamane baphila impilo yokuhlala phansi baqale ukunciphisa umzimba. Kulokhu, izizathu ezihambisana nokuphulwa kwezempilo kufanele zibhekwe.
Phakathi kwezinto ezivame kakhulu ezenza ukuthi abantu banciphise isisindo yingcindezi. Okusho ukuthi, ukucindezelwa okungokomzwelo nezimo ezihambisana nalokhu zithinta isisindo somzimba womuntu. Impilo yamadoda wanamuhla ayikwazi ukubizwa ngokuthi ezolile. Ngempela, ukucindezelwa nokukhathazeka kubalindele yonke indawo: ekhaya nasemsebenzini, ohambweni nangezikhathi zokuzilibazisa. Indoda ejwayelekile iyesaba kakhulu, ngoba lokhu kuzothinta izinsimbi zesikhombisi.
Ngaphezu kwalokho, ngokuncipha okubukhali kwesisindo ngesikhathi sokucindezela, ukulala kuyaphazamiseka, ukuqaqamba kwekhanda nokugayeka kwenzeka. Umuntu uba nolaka, aphazamiseke, acindezeleke. Ukhathala ngokushesha. Umzimba awukwazi ukunqoba ngokuzimela zonke izinkinga ezibalulekile. Kodwa-ke, uma isisindo sincishisiwe, kubalulekile ukubonana nodokotela ngokushesha. Ngemuva kwakho konke, imbangela yalokhu kungaba yizifo ezidinga ukwelashwa.
Ezimweni eziningi, ukunciphisa umzimba ngokushesha kuchazwa iqiniso lokuthi umzimba udonsa amandla awunawo kusuka izicubu zomzimba namafutha omzimba ukuze unqobe izifo ezifihliwe. Ngasikhathi sinye, indoda idla kahle futhi kungenzeka ingaqondi izizathu zokunciphisa umzimba. Ukwehla kwesisindo okungenakufinyeleleka yisikhathi sokuhlangana nodokotela. Ukutholakala kokugula kusheshe kutholakale, kukhulu ithuba lokululama.
Imvamisa izimbangela zokuncipha kwesisindo ziyi-thyroid pathologies. Uma kunenkinga ngalesi sitho, khona-ke ukwakheka kwamakhompiyutha kuyashesha ohlelweni lwe-endocrine, ngenxa yalokho ukushiswa kwamakhalori kusuka ekudleni kukhuphuka. Naphezu kweqiniso lokuthi umuntu udla kanzima, uhola impilo yokuhlala, isisindo emehlweni siyancipha. Uma ungakufuni ukwelashwa ngesikhathi, i-hyperthyroidism iyakhula. Lesi yisifo esibonakaliswa ukukhiqizwa okwandayo kwama-hormone egilo. Izimpawu ze-hyperthyroidism yilezi:
ukulahleka kwesisindo okubukhali kuze kufike kumakhilogremu ayishumi ngesifiso sokudla,
ukwephulwa komsebenzi we-erectile.
Ukuphela kwendlela yokuvakashela i-endocrinologist. Ukuhlolwa okufika ngesikhathi kuzokwazi ukwenza ukuxilongwa okuyiqiniso bese ukhetha uhlobo lokwelashwa oluphelele.
Isizathu sokunciphisa umzimba obukhali uvame ukuba nesifo sikashukela. Isifo esinjalo esikhohlisayo sivele sivele ngokubonakaliswa kokungajabuli, lapho umuntu engatholi isisindo somzimba ngaso sonke isikhathi, kodwa kunalokho ulahlekelwe. Izimpawu zokuphawulwa kwalesi sifo isifo esomile njalo, esingakwazi ukucishwa ngenani elikhulu lamanzi, iphunga le-acetone elisuka emgodleni womlomo kanye nokufutheka ngokweqile. Ngesifo esinjalo, umuntu angaba nokuzwa okwesikhashana. Esigabeni sokuqala, ngaphezu kwesisindo esinamandla ngokuthambekela okuphezulu, njengomthetho, akukho lutho olukhathazayo. Izimpawu zesifo sikashukela azinakwa. Ngezibonakaliso zokuqala ezingezinhle, kuyalulekwa ukubonana nodokotela.
Imbangela yokuncipha kwesisindo ingaba ukwephulwa komgudu wokugaya ukudla, izifo ezithathelwanayo, ukungondleki kahle, umlutha wezidakamizwa, isifo sofuba. Kufanele kuqondwe ukuthi ngisho nokuba nempilo enhle nendlela yokuphila ejwayelekile, umuntu akakwazi ukungakunaki ukulahleka kwesisindo okubukhali. Kungcono ukuvakashela udokotela futhi uthole izimbangela zalokhu kubonakaliswa, kunokuba ususe izingqinamba nemiphumela eye yaba khona isikhathi eside.